विकिपीडियाबाट सबैभन्दा प्रसिद्ध वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्न सिल्टल्टबाट ट्यूटोरियल
गतिशील वेबसाइटहरू रोबोटहरू प्रयोग गर्छन्।. txt फाईलहरू कुनै पनि स्क्रैपिंग गतिविधि नियन्त्रण र नियन्त्रण गर्न. यी साइटहरू वेब स्क्रैपिंग सर्तहरू र ब्ल्याकरहरू र विपक्षीहरूलाई आफ्नो साइटहरू स्क्रैप गर्नबाट रोक्नको लागि सर्तहरूद्वारा सुरक्षित गरिन्छन्।. शुरुवातकर्ताहरूको लागि, वेब स्क्रैपिंग वेबसाइटहरू र वेब पेजहरूबाट डेटा एकत्रित गर्ने प्रक्रिया र त्यसपछि पढ्न योग्य ढाँचामा बचत गर्न बचत गर्नुहोस्.
गतिशील वेबसाइटहरूबाट उपयोगी डेटा पुन: प्राप्त गर्दै एक जटिल काम हुन सक्छ. डेटा निष्कर्षण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, वेबमास्टरहरूले रोबोटहरू प्रयोग गर्न आवश्यक जानकारी पाउन सकेन - business valuation service business. गतिशील साइटहरू 'अनुमति' र 'अस्वीकृत' निर्देशनहरू समावेश छन् जुन रोबोटहरू पठाउँछन् जहाँ स्क्रैपिंग अनुमति छ र जहाँ होइन.
विकिपीडियाबाट सबैभन्दा प्रसिद्ध साइटहरू स्क्रैप गर्दै
यो ट्यूटोरियल एक ब्रान्ड बेइजिङ इन्टरनेटबाट साइटहरू स्क्रैपिंगमा एक अध्ययन अध्ययन गरिएको छ।. ब्रान्ड विकिपीडियाबाट सबैभन्दा शक्तिशाली साइटहरूको सूची संकलन गरी सुरु भयो. ब्रान्डको प्राथमिक उद्देश्य रोबोटमा आधारित वेब डेटा निष्कर्षमा खुला वेबसाईटहरूको पहिचान गर्न थियो. txt नियमहरू. यदि तपाइँ साइट साइट स्क्रैप गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनबाट बच्नको लागि वेबसाईटको सर्त सेवामा विचार गर्नुहोस्.
गतिशील साइटहरु को स्क्रैपिंग नियम
वेब डेटा निकासी उपकरण संग, साइट स्क्रैपिंग सिर्फ एक क्लिक को मामला हो. ब्राण्डन बालीले विकिपीडिया साइटहरू वर्गीकृत गर्ने विस्तृत विश्लेषणमा विस्तृत विश्लेषण र यसको प्रयोग गर्ने मापदण्डहरू तल उल्लेख गरिएका छन्:
ब्रेंडनको मुद्दा अध्ययनअनुसार, सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइटहरू मिश्रित रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।. पाइ चार्ट मा, नियमहरु को मिश्रण संग वेबसाइटहरु 69% को प्रतिनिधित्व गर्दछ. Google को रोबोट. txt मिश्रित रोबोटहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हो. txt.
पूर्ण अनुमति दिनुहोस्, अर्कोतर्फ, 8%. यस सन्दर्भमा, अनुमति अनुमति दिनुहोस् साइट रोबोटहरू. txt फाईलले स्वत: प्रोग्राम पहुँच सम्पूर्ण साइट स्क्रैप गर्न दिन्छ. Soundcloud ले लिनको लागि उत्तम उदाहरण हो. पूर्ण अनुमति साइटहरूको अन्य उदाहरणहरू समावेश छन्:
वेबसाइटहरु "Not Set" को साथ चार्ट मा प्रस्तुत गरिएको कुल संख्या को 11% को लागी. सेट गरिएको छैन निम्न दुई चीजहरू: वा साइटहरू रोबोटहरू छन्. txt फाइल, वा साइटहरूको लागि "प्रयोगकर्ता एजेन्ट" को लागि नियमहरू छन्. "वेबसाइटहरू जहाँ रोबोटहरूको उदाहरणहरू. txt फाइल "सेट छैन" समावेश छ:
पूर्ण अनुच्छेद साइटहरु लाई आफ्नो साइटहरु लाई स्क्रैपिंग देखि स्वचालित कार्यक्रम को निषेधित गर्दछ. लिङ्क इन पूर्ण समालो साइटहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हो. पूर्ण अस्वीकार साइटहरूको अन्य उदाहरणहरू समावेश छन्:
वेब स्क्रैपिंग डेटा निकालन को लागि सबै भन्दा राम्रो समाधान हो. यद्यपि, केहि गतिशील वेबसाइटहरू स्क्रैपिंगले तपाईंलाई ठूलो समस्यामा ल्याउन सक्छ. यो ट्यूटोरियलले तपाईंलाई रोबोट बारे थप जान्न मद्दत गर्नेछ. txt फाइल र भविष्यमा हुन सक्ने समस्याहरू रोक्न.